Ambongadiny mamafa solo-jaza voajanahary azo ovaina ao an-trano Tsy misy mpamatsy sy mpanamboatra fofona | tsara kokoa
Anaran'ny vokatra: Ny zaza mamafa ny vavan'ny tanana
Model Model: QMSJ-307
Fitaovana: Lamba malefaka tsy misy tenona amin'ny spunlace malefaka
Fangaro: Vitamina C, Vitamina E, Xylitol, rano voadio RO, moisturizer voajanahary voajanahary, sns.
Habe: 8,75 "* 5,75"
Lanja (Gramme / metatra toradroa): 45gsm
Sasa isaky ny kitapo: 72 pcs
Fampiasana manokana: Fanadiovana; Lanolin mitazona ny hamandoana amin'ny hoditra; Rano voadio mitazona ny hamandoan'ny hoditra.
MOQ: Kapoaka 5000
* Ho an'ny fahadiovan'ny zazao tsara kokoa
Ity mamafa tanana an-jaza ity dia mety amin'ny namaoka ny vava sy ny tanan'ny zaza. Ny vahaolana momba ny famafana zaza an-drano dia misy vitamina C, vitamina E, xylitol ary akora hafa, izay afaka mandena ny hoditra sady manadio ny hoditra ary mampifandanja kokoa ny sakafo mahavelona. Tena sariaka sy azo antoka amin'ny zazakely izy io, tsy misy maninona. Hamafa lena lena ho an'ny zaza.
Ny lamba tsy misy tenona spunlace avo lenta dia malefaka be ary manadio moramora ny hoditry ny zaza. Ity hamafana ity dia fanosana zaza tsy misy fofona, ary ireo mamafa tsy misy fofona dia mora manorisory ny hoditry ny zaza malemy.
* Ny ekipanay
Amin'ny maha mpanamboatra solo-lena anao, vokatra tsara kokoa isan'andro, LTD dia tena faly manome anao serivisy namboarina, samy OEM na ODM no misy. Amin'ny maha-famerenana sy fampiasana traikefa an'ny solo-jaza azy, dia mety hanana fepetra bebe kokoa amin'ny famafana fanadiovana zaza ianao. Te hilaza aminao aho fa ho mpiara-miombon'antoka tonga lafatra aminao izahay. Manana ekipa mpikaroka momba ny famokarana matihanina, ekipa mpivarotra ary manana ekipa mpamorona matihanina koa izahay.
Angamba manana ny hevitrao manokana momba ny hateviny sy ny haben'ny solo-jaza ianao, ny isan'ny solooka isaky ny fonosana, ary ny endrik'ilay vahaolana. Azafady mba lazao anay ary avelao izahay hanampy anao hamorona vokatra vaovao. Afaka mihaino tsara ny soso-kevitrao izahay amin'ny fiaraha-miasa aminao ary manome hevitra feno sy matihanina.
Mino izahay fa amin'ny ezaka ataontsika, dia tena hanao vokatra tena tsara sy sarobidy tokoa izahay. Manantena izahay fa ny ataontsika dia tsy ny famokarana vokatra zaza fotsiny, fa ny hitondra fomba fiaina mahasalama sy madio ary mety kokoa ho an'ny zanak'olombelona. Manantena izahay fa hanampy amin'ny fanatsarana ny kalitaon'ny fiainan'ny olombelona rehetra. Tsy vitan'ny hoe manamboatra vokatra fotsiny isika fa manao zavatra misy dikany kokoa noho ilay vokatra ihany.
Azafady mba tsy ho azon'ny zazakely izany mba tsy hitelina.
Tehirizo moramora amin'ny toerana maina misy volony
Ity vokatra ity dia tsy mety levona anaty rano, azafady apetraho ao anaty fitoeram-pako ara-potoana
Fanamarihana manokana: Raha manana allergy ianao dia mampiato ny fampiasana avy hatrany ary mitady fitsaboana.
Teo aloha: Ny fanadiovana malefaka ny palitao mamafa mamafa amin'ny lamba spunlace tsy misy tenona avo lenta
Manaraka: Ny solo-drano lena dia misy vitamina E sy C Fampidinana ny tarehy fanesorana tarehy mahomby amin'ny tarehy
mamafa otrikaretina zaza
Fandroana fandroana zaza
Sipa fanadiovana zazakely
Famafana tanana tanana
Ny zaza mamafa ny vavan'ny tanana
Safo lena tsara indrindra ho an'ny zazakely
Famafana zazakely tsy azo ovaina
fanadiovana amin'ny solo-jaza
Famafana rano miorina amin'ny rano